Tsika dzakanongedzwa tsika yekatuni pateni yemhuka katuni matiketi
Zita: Katuni kateki anonamira Ruvara / dhizaini: Ruvara, akasiyana monochrome Cartoon hunhu tattoo matikita Saizi / modhi nhamba: 10 * 20cm Anoshanda zera: 3+ Chinyorwa: bepa Chigadzirwa kurongedza: rimwe chete jira rine kumashure kadhi muOPP bhegi Maitiro: kudhinda / kunama, kurongedza Sirufu hupenyu: 1 gore Chengetedzo zviyero: inogona kupfuudza bvunzo dzakakodzera dzeEU / US zviyero zvetoyi Abstract katuni nyora zvidhori Kazhinji, zvidhori zvetatoo mamaki ekuchinjisa emvura. Kana iyo pateni yakaenzana uye isina yakawandisa protrus ...
zvakagadziriswa maratidziro, akagadziriswa mapatani, akajeka matatoo
Ruva tattoo zvimiti Aesthetic nyora zvidhori zvinokupa iwe runako rudiki muhupenyu hwako chaihwo. Isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu mukushandisa masitiketi yetatoo. Isu tinofanirwa kunyatso bvisa firimu rematato. Tinofanira kudzikisa huwandu hwezvigadzirwa pamakona kuti tirege kunamatira paganda redu. Ipapo isu tinofanirwa kufukidza kumeso kwetatoo neyakaenzana patate pane iyo nyora. Ipapo isu tinogona kushandisa yakanyorova tauro kana inodziya mvura kugadzira nyora zvidhori zvinyoro. Hafu yeminiti gare gare, akafukunura iyo ...
Tongedza mhando dzese dzakanakisa mapatani, monochrome uye multicolor inotonhorera matikiki
Monochrome inotonhorera matikiki Iwo iwo mabhenefiti eanotonhorera matikita ezvinyoro: kugadzirwa kwakanaka, mavara akajeka uye yakasimba matatu-mativi mhedzisiro. Masitaera akasiyanasiyana, akanaka uye ane fashoni, hunoshamisa hunyanzvi, mitengo yakasarudzika Ichi chigadzirwa chinoshandisa gundi inobviswa, iyo inogona kushandiswa kakawanda isina zvayakabata mushure mekubvarura. Hazvikuvadze chinhu, uye kukamurwa kwechiedza nekamera tekinoroji haigone kuburitsa maitiro. Chinhu chakagamuchirwa chiri nani pane mufananidzo. N ...
Yakasarudzika pateni saizi roll roll chinamirwa chigadzirwa
CHIDZIDZO CHIDZIDZO Chigadzirwa: yemhangura bepa zvinhu, PP yekugadzira bepa, pearl firimu, anti-yekunyepedzera zvinhu, inoonekera yerabha zvinhu, inopenya sirivheri pabhabha zvinhu, matte sirivha rabha pamusoro zvinhu, 3D ruvara kuchinja chakuvhuvhu zvinhu, nezvimwe zvakakosha zvinhu zvinogona kugadzirwa. zvinoenderana nezvinodiwa. Chigadzirwa chemukati zvinhu: default mapepa emhando yepamusoro, akakosha machira anogona kuve akagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa. Chigadzirwa chepakati dhayamita: inowanzo shandiswa 30mm, 40mm, 75mm, othe ...
Gadzirisa akasiyana mavara uye saizi dzakasiyana patani bubble zvinamato
Chigadzirwa Chigadzirwa Chigadzirwa zita: Ruvara pateni bubble chinamirwa Chigadzirwa maficha: akanaka ruoko kunzwa, yakanaka isina mvura kuita, kwete nyore kuputsa, yakanaka chinamatira kunamatira, inogara-kwenguva nguva, hazvisi nyore kudonha, akasiyana masitaera, akaisvonaka uye avant-garde fashoni, zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinhu, yakajeka pateni yekudhinda, yakadzokororwa kunama, nezvimwe Chigadzirwa mabhenefiti: fekitori yakananga kutengesa inotengeka, hunyanzvi hwetsika, vimbiso yemhando, pateni maitiro, LOGO, zvinhu, specifi ...